Kutsvaga pasuru pane kugara kugovana-hupfumi kuchave 2022 maitiro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kutsvaga pasuru pane kugara kugovana-hupfumi kuchave 2022 maitiro
Apo hupfumi hwekugoverana hwakanga huchangotanga, vabatsiri vakadai seAirbnb vakaunza maonero matsva pamusoro pekugara, nechisimbiso chekuzvimirira uye munhu oga. Asi mahotera abata, achitarisa pamitemo isinganyanyi kuomeswa, senge yekupinda-yekutanga, kunonoka kubuda-kubuda uye kushoma-stuffy nzvimbo dzenharaunda.
Vagadziri vezororo regore rinouya vane mukana wakapetwa kana kusarudza chengetedzo yezororo repasuru pane kusarudza yekugovana hupfumi sarudzo, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London.
Vanenge chikamu chimwe muzvitatu (32%) cheavo vanofunga nezvezororo remhiri kwemakungwa muna 2022 ndivo vangango bhuka zororo repasuru, zvichienzaniswa ne8% vanozobhuka kuburikidza nenzvimbo yehupfumi yekugovana, senge Airbnb, inoratidza WTM Indasitiri Report, iyo yakabvunzurudza. 1,000 UK vatengi.
Vagadziri vezororo kubva kune dzimwe nzvimbo dzenyika, kusanganisira North Wales kana North East, vanoti havangatore sarudzo yekugovana hupfumi zvachose, nepo avo vari kuSouth West (21%), Greater London (14%) neYorkshire neHumber ( 13%) ndivo vane mukana wekubhuka kugara kweAirbnb.
Kugovera hupfumi hwekugovera kwakakwira 73% pakati pe2013 ne2014, nePwC kufanotaura kuti inogona kuverengera 50% yekugara kwezororo ne2025. Zvisinei, pane nguva yakareba paine kunetsekana muindasitiri yekufambisa pamusoro pekugovana mutemo wehupfumi, pamwe panguva iyoyo-Sachigaro weABTA, Noel. Josephides, achimutsa nyaya yacho makore 15 apfuura.
Kugovera vanopa pekugara kwehupfumi vakashuma kuwanda kwekuchengetwa kwekutanga kwedenda sezvo vafambi vainzvenga mahotera edzimba dzevanhu. Asi vamwe vanoti misiyano yeCCIDIDs yaona kubhukidzwa kuchidzikira nguva pfupi yadarika, neAirbnb ichitarisira kushomeka kwemavhoriyamu ekubhuka uye yambiro 2021 icharamba iri pasi pemazinga a2019.
Zvichakadaro, kucheka kunogara kuchiita uye kuchinja kwakakonzerwa neiyo UK Government's traffic light system yakaratidza mabhenefiti ekubhuroka ATOL-yakachengetedzwa pasuru yezororo kuburikidza nekambani ine mukurumbira, nevazhinji vashandisi nevamiriri vanochinja marongero kuti vabvumire kuchinjika kwakawanda kune vanoenda kuzororo vanoda kuchinjanisa. kune mutsauko wekuenda kana zuva.
Kuti varwise kudonha - uye kuwana mari pamaitiro ebasa-kubva-chero kupi zvako, Airbnb yakatanga chirongwa che'Rarama Chero Kwese paAirbnb' muna Chikumi, chinopa gore rekugara mahara, kune vashandisi vanogovana zvavanosangana nazvo. Zvinouya sekuti mupi wepekugara akati kugara kwemazuva makumi maviri nemasere kana kupfuura kwakawedzera mukota yekutanga ya28.
Mukuru weWTM London Exhibition Director Simon Press akati: "Denda reCOVID pasina mubvunzo rakakanganisa sarudzo dzevanhu pamhando yepekugara yavanonzwa kugadzikana, nemakambani emapasuru ezororo achisundidzira mabhenefiti ekuchengetedzwa kweATOL uye kubhuroka kuri nyore, kunyangwe zvakanaka kutaura izvi. zvinofarirwa neAirbnb zvakare zvino zvinopa kuchinjika kwakawanda, kana vanhu vakachinja pfungwa dzavo.
"Apo hupfumi hwekugovana hwakanga huchangotanga, vabatsiri vakaita seAirbnb vakaunza maonero matsva pamusoro pekugara, nechisimbiso chekuzvimirira uye kuzvimiririra. Asi mahotera abata, achitarisa pamitemo isinganyanyi kuomeswa, senge yekukurumidza kupinda-pinda, kunonoka kubuda-kunze uye kushomeka-kune nharaunda nzvimbo.
“Zvakare, nzvimbo zhinji dzinogovana zvivakwa zvehupfumi zvakanaka dziri munzvimbo dzine mukurumbira dzevashanyi uko kune kushomeka kwemahotera echinyakare. Asi, tichifunga kuti COVID yakavhara pasi zvakanyanya mumwedzi gumi nemasere yapfuura, iro harisi dambudziko parizvino.
“Pakupedzisira, mushure memwedzi yakawanda tichiudzwa kuti tigare mudzimba, vazhinji vedu taneta nekuzviraramisa, saka pfungwa yekubhuroka hotera ine sarudzo yendiro itsva uye dzinonakidza, dzakabikwa nemumwe munhu, dzinofadza. avo vedu vanongoda mumwe munhu kuti avamirire kwemavhiki mashoma. "